Ramadany - Wikipedia
Ny Ramadany dia volana fahasivy ao amin' ny tetiandro miozolmana na tetiandro silamo. Io ihany ny anaram-bolana hita ao amin' ny boky Kor'any. Ho an' ny mpino silamo dia io no volana tsara indrindra satria io no volana ifadian-kanina (arabo: saum) sady ahitana ilay atao hoe Laylat al-Qadr. Avy amin' ny teny arabo hoe رمضان / ramaḍān ny teny nogasina hoe ramadany. Ny volana Sabàny no eo alohany ary ny volana Saoaly no manaraka azy.
Ny fifadian-kanina amin' ny volana Ramadany dia iray amin' ireo fototra na andry dimin' ny finoana silamo. Mandritra io volana io ny mpino silamo feno taona, araka ny firehana silamo maro, dia tsy tokony hihinana na hisotro na hifoka na hanao firaisana ara-nofo mandritra ny fotona avy eo amin' ny mazava atsinanana ka hatramin'ny filentehan' ny masoandro. Volan' ny falala-tanana ny Ramadany, satria rehefa mifarana izy dia mizara ho an' ny mahantra ny mpino, izany no atao hoe zakât al-fitr. Volana ahatsiarovana zava-niseho maro teo amin' ny tantaran' ny finoana silamo koa ny Ramadany.
Volana ao amin' ny tetiandro miozolmana: Moharamo (arabo: مُحَرَّم / Muḥarram), Safary (صفر / Safar), Rabialaoaly (ربيع الأوّل / Rabi' al Awal), Rabiatany (ربيع الثاني / Rabi' ath-Thani), Jomadaalaoaly (جُمَادَىٰ الْأَوَّل / Jumada al Awwal), Jomadaatania (جمادى الثاني / Jumada ath-Thania), Rajabo (رجب / Rajab), Sabàny (شعبان / Sha'bane), Ramadany (رمضان / Ramadan), Saoaly (شوّال / Shawwal), Doalkidà (ذو القعدة / Dhu al Qidah), Doalhija (ذو الحجة / Dhu al-Hijja).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramadany&oldid=1013453"
Voaova farany tamin'ny 8 Aogositra 2021 amin'ny 11:48 ity pejy ity.